Hanolotra seho roa : efa eto ry Poetic Lover | NewsMada
Tarika nambabo ny tanora tany amin’ny taona 97 hatramin’ny 2002 tany ry Poetic Lover… Efa tamin’izany no mba naniry hahita azy ireto an-tsehatra ireo mpankafy eto Madagasikara, saingy nijanona ho nofinofy fotsiny izany. 20 taona aty aoriana kosa vao ho tanteraka izany, satria efa eto ary hanatontosa seho roa izy ireo.
Hotontosaina, ny zoma 19 mey izao ao amin’ny Kudeta Carlton, ny seho voalohany, ka vahiny amin’izany i Grace Loren sy i Steph Rambi. Etsy Antsahamanitra, ny asabotsy 20 mey kosa, ny seho faharoa, hialohavan’ny fandraisana anjaran’i Marion sy i Mr Sayda.
Izay vao hahita an-tsehatra sy mivantana an-dry Carry Kani, Dré, Jay Kani ary Little T izany ireo mpankafy azy. Mazava loatra fa ireo hira tena nalaza tany am-boalohany ihany no andrasan’ny rehetra, toy ny “Fier d’avoir ton love”, “Prenons notre temps”, “Qu’il en soit ainsi”, “Cette femme”, sns. Tsiahivina fa anisan’ny nampiavaka ny Poetic Lover ny filalaovany ny tononkiram-pitiavana amin’ny teny frantsay, nambabo ireo tanora tamin’izany fotoana izany. Ho hita eo, mandritra ireo seho roa ireo, raha niampita tamin’ireo tanora taty aoriana izany…